Hery Rajaonarimampianina : « Fototry ny filaminana ny fifandimbiasam-pahefana » -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : « Fototry ny filaminana ny fifandimbiasam-pahefana »
Omaly no nanome voninahitra ny lanonana fifamindram-pibaikoana teo anivon’ny zandarimariam-pirenena ny Filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina, niaraka tamin’ny filohan’ny Antenimieran-doholona, Rivo Rakotovao, sy ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta ary ireo manamboninahitra sivily sy miaramila.
Tamin’izany indrindra no nanambaran’ny Filohan’ny Repoblika tamin’ny lahateny nataony fa mila manaiky ny fifandimbiasam-pibaikoana na koa fifandimbiasam-pahefana ny rehetra, indrindra ireo olom-boafidy, satria fahefana na fibaikoana atolotra amin’ny anaran’ny vahoaka malagasy izany. Izay indrindra, hoy izy no fototry ny filaminana sy fandrosoan’ny firenena ary fototry ny demokrasia ihany koa, izay himatimatesana amin’ny fampandrosoana ny firenena.
Nitodika tamin’ny fianakaviamben’ny zandarimaria nasionaly ihany koa ny Filoha Hery Rajaonarimampianina fa mila mijoro izy ireo. « Sarotra ny lalana diavintsika, ary ho sarotra foana io. Rehefa resintsika ny fahantrana eto amin’ny firenena, izay vao ho mora ny asan’ny zandrarimariam-pirenena », hoy izy.
Ankoatra izay, dia hentitra ihany koa ny Filohan’ny Repoblika nilaza fa mila mitandrina ny rehetra amin’ny fandemen-tsaina atao amin’ny vahoaka. Nambarany fa anisan’ny tena zava-doza ny fampihorohoroana ara-tsaina. « Betsaka loatra amin’izao fotoana izao, ny fandemen-tsaina entina sy atao amin’ny vahoaka amin’ny alalan’ireo haino aman-jery sy teknôlôjia vaovao. Volavolaina amin’ny toe-tsaina maro samihafa amin’ny alalan’ny tsaho sy ny lainga isan-tokony ny vahoaka. Fa ny tena zava-doza indrindra dia ny fampihorohoroana ara-tsaina fa tsy fampihorohoroana amin’ny alalan’ny basy na tafondro. Noho izany, mila mitandrina isika manoloana izany », hoy hatrany ny Filoham-pirenena.
Etsy andaniny, nambarany fa taona miavaka ny taona 2018. Noho izany mila fitoniana ny firenena, mila fitoniana ny vahoaka. Noho izany indrindra, nanipy hafatra ho an’ny vahoaka malagasy ny Filohan’ny Repoblika fa ilaina ny hambompom-pirenena, ny hambompo iraisana ary indrindra ilay hambopom-pisandratana, izay hampisandratana ny firenena sy hampisandratra ny fiainan’ny vahoaka.
Nambarany ihany koa fa ilaina ny fahadiovan’ny toe-tsaina, ny fahadiovam-po. Izany rehetra izany hoy izy no mila hajoro hampandrosoana ny firenena. “Izany fahadiovan’ny toe-tsaina sy fahadiovam-po izany indrindra no entina amin’ilay toe-tsain’ny Fisandratana ho amin’ny fampandrosoana ao anatin’ny fihavanana, fitiavan-tanindrazana, sns”, hoy izy.
Miantso ny mpiray tanindrazana ihany koa ny Filoham-pirenena mba hitodika sy hampiseho ny tena fitiavan-tanindrazana. “Aza manaratsy ny tanindrazanao, aza manapotika ny tanindrazanao fa mandraisa anjara amin’ny fampandrosoana ny firenena”, hoy izy.
Faritra maro teto Madagasikara no notsidihan’ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana, omaly. Kandidà tafita hiatrika ny fihodinana faharoa amin’ny fifidianana Filoham-pirenena. Araka izany, nandray ny kandidà Marc Ravalomanana ny tao Morondava, Vohipeno, Mananjary, Ambilobe, sns. ...Tohiny